नेकपा भनेकाे काेदाे र ताेरीकाे मिश्रण जस्तै हाे, पिस्ने कि पेल्ने ! - Digital Khabar
By याेगेन्द्र खरेल Last updated Jul 18, 2021
२७ असार, पाेर्चुगल । प्रसङ्ग नेकपा एमाले र नेकपा माअेाबादी मिलन भई नेकपा बन्ने बेला हाे । एकजना बिपक्षी दलकाे माननियले सायद साङ्सद बैठकमै बाेल्नुभएकाे थियाे । याे नेकपा भनेकाे काेदाे र ताेरीकाे मिश्रण जस्तै हाे । पहिलाे कुरा यसलाई पिस्ने कि पेल्ने ? सायद पिसे पनि पेले पनि यसले न त तेल दिन्छ न त पिठाे ।
उति बेला नेकपा कार्यकर्ताहरुले निकै खेदाे खने उनकाे । नेकपा निकट सन्चार माध्यहरु पनि उनकाे पछि हात धाेएर लागे बिचरा उनिहरुलाई के थाहा जुन वाक्य आज सत्य साबित हुने छ । आज नेकपा भित्र जे चलिरहेकाे छ । र जे देखिईरहेकाे छ त्यसले उनकाे वाक्य सत्य साबित गरिसकेकाे छ ।
मस्त निद्रामा भएकाे बेला आज फाेनकाे घण्टी बज्याे, फाेन हेरे । एउटा अनलाइन पत्रिकाका सम्पादक ज्यु काे फाेन रहेछ । फाेन उठाए , सन्चाेबिसन्चाे पछि उहाले साेध्नु भयाे ! के अब नेकपा फुट्ला त ? मैले निसङ्काेच जवाफ दिए अह कुनै हालतमा फुट्दैन । उहाँ आश्चर्य हुँदै भन्नुुभयाे के तपाई हिजाे आजकाे राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकार हुनुहुन्न हाे ? मैले भने, जानकार छु र त भनिरहेकाे छु नेकपा फुट्दैन ।
नेकपा एमाले र नेकपा माअेाबादी मिलन भएर नेकपा बनेका दिनहरु तिर फर्केर हेराै । हामी पार्टी एकीकरण गरेर स्थायी सरकार दिन्छाै र देश बिकासकाे अभिभारा पूरा गर्छाै भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माअेाबादी आपसमा तालमेल गरी निर्वाचनमा गए ।
नेकपा काेदाे र ताेरिकाे मिश्रण हाे ,
याे न त पिस्न मिल्छ न त पेल्न मिल्छ ,
न त टुट्याउनै सकिन्छ
अस्थायी अस्थिर सरकार र बिकासबिहिनता बाट वाक्क बनेका जनता सामु, स्थायि सरकार दिनुहाेस, बिकाशकाे मुल हामी फुटाउछाै भन्दै जनतासामु पुगेका उनिहरुका नेता कार्यकर्ताहरुका अभिब्यक्तिमा सहमत हुँदै नेपाली जनताले उनिहरुले नै नसाेचेकाे परिणाम दिए ।
किनकि जनता बिकासकाे भाेकाे थिए । उक्त परिणाम बाट क. खड्कप्रसाद निकै हाैसिएका थिए । आफ्नै एकल प्रयासले याे सफलता प्राप्त गरेकाे र रियल हिराे आफू नै भएकाे भन्दै उखानटुक्कासहित हाैसिएका देखिन्थे भने अर्काे तिर नामाेनिसान मेटिने डरले अनिद्राकाे सिकार भएका क. प्रचण्ड पनि नाक जाेगिएकाेमा गर्व गरिरहेका थिए ।
याे सफलतासङ्गै निकै खुसि भएका यिनिहरुका स्थानिय नेता कार्यकर्ताहरुलाई के थाहा ? यसरी काैवालाई बेल पाक्याे हर्ष न बिस्मात हाेला भन्ने । उनिहरु पनि सामेल भए बिजय उत्सबहरुमा र रङ्गहरुकाे हाेलि खेले । बिचरा उनिहरुलाई के थाहा यही नतिजाले आज पर्सामा रगतकाे हाेलि खेल्नेदिन आउला भनेर ।
याे चुनावी परिणामबाट हाैसिएका क. खड्कप्रसाद सायद पार्टी एकता चाहदैनथिए हेाला भन्ने कुरामा अब शङ्का गरिरहनुनपर्ला । उनी किमार्थ पार्टि एकता चाहदैन थिए तर क. प्रचण्डकाे उनी सामु आत्मसमर्पण र नेता कार्यकर्ताहरुकाे दबाबबिच पार्टी एकता गरेजस्ताे गरे तर नेकपाका कार्यकर्ताहरुले पत्याईदिए । याे पार्टी एकता नेकपा नेता कार्यकर्ताहरुले बाहेक अरुले आजसम्म स्विकारका छैनन याे पार्टी एकता हाे भनेर ।
हुन पनि कसरी स्विकार्नु, करिब एक दशक लामाे क्रान्तिकारी ईतिहास बाेकेकाे र उसकै भाषामा भन्दा जनयुद्ध बाट भर्खर भर्खर शान्ति प्रक्रियामा अबतरण गरेकाे नेकपा माअेाबादी र लामाे समय देखि नितान्त सान्सदिय प्रक्रिया अबलम्बन गरेकाे नेकपा एमालेकाे एकीकरण त्यति सजिलै सम्भव थिएन र छैन पनि । मैले बुझेकाे, पार्टी एकीकरण हुदा पहिले निति र सिध्दान्तकाे बहस हुनुपर्दछ । जब सिध्दान्तगत रुपमा बिचार मिल्छ तब मात्र पार्टी एकता सम्भब हुन्छ ।
तर नेकपाकाे बनाेट यसरी भएन, नीति र सिध्दान्त लाई गाैण मानियाे भने पदलाई प्राथमिता दिईयाे । अध्यक्षहरु र केन्द्रीय समितिमा पदकाे कुरा मिल्याे । पदिय लेनदेनमा सहमति भयाे यसैलाई पार्टी एकता भन्दै स्यालहुय्या पिटियाे, कार्यकर्ताहरुले दिपावलि गरे । आखिर याे भन्दा बढ्ता केही भएकाे थियाे त नेकपा बन्ने बेलामा ? लगभग पद लेनदेन मिल्नु लाई नै पार्टी एकता भएकाे घाेषणा गरियाे। देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाई नजिक नजिककाे केन्द्र सरकार र प्रत्येक प्रदेशमा उसकै पार्टीको सरकार बन्याे । याे कम्युनिस्ट सकारले पक्कै पनि राम्रो काम गर्ने छ, देशमा बिकास र समृद्धि आउनेछ भन्नेमा अधिकाङ्स नेपालिहरु ढुक्क थिए ।
ढुक्क पनि किन नहुन कम्युनिस्ट पार्टीको बलियाे सरकार र देशभक्त भनिएका क. खड्कप्रसाद नै प्रधानमन्त्री भएपछि त । धेरैकाे आशा थियाे , हाम्रा प्रधानमन्त्री देशबिकासका खड्क लिएर उत्रने छन् । देश उनले भनेजस्ताे कायापलट हाेईन, देखिने गरि देशमा बिकाश गर्नेछन भन्नेमा हामी सबै ढुक्क थियाै । तर अब त केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आश पनि मारिसके हाेलान जनताले, खै के आशा गर्नु र कम्युनिस्टकाे नाम बेचेर खाने धुर्तहरुकाे ।
अढाई तीन बर्षकाे अबधिमा १२/१३ पटक सरकार पुनर्गठन गरेकाे सरकारलाई स्थायि सरकार भनेर हामिले पत्याईदिनपर्ने, बिकास र समृद्धि हाम्रैपालमा भन्दै पाेलपाेलमा खड्कप्रसादकाे फाेटाे टासिएकाे तस्बिरमा आएपछि देशमा समृद्धि नै आयाे भनेर पत्याईदिनुपर्ने । चुच्चे नक्सा आयाे भन्दैमा उक्त भुमि नै हाम्रो भयाे भनेर पत्याईदिनुपर्ने । सरकारले निकै काैशलताका साथ काेराेनाकाे राेकथाम र उपचार गर्याे भनेर पत्याईदिनुपर्नेे । देशमा काेहि भाेका राेगी बेराेजगार छैनन भनेर पत्याईदिनुपर्ने । निर्मला र उनी उस्तै बलात्ककार र हत्या गरिएका चेलिरहरुले न्याय पाए भनेर पत्याईदिनुपर्ने । घरघरमा ग्यासकाे पाईप आयाे भनेर पत्याईदिनुपर्ने । पाेखरा म्याग्दि हुँदै बाग्लुङ सम्म रेलमा गए भनेर भनिदिनु पर्ने यी र यस्तै अपेझा गरेकाे छ बर्तमान सरकारले ।
याे सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार माैलाउदै गयाे, जनताका हकहितमा काम भएन भन्ने कारणले नै शुरु भएकाे हाे त नेकपाभित्रकाे किचलाे ? अह बिल्कुल त्यसाे हाेईन ।
याे नेकपाकाे किचलाेकाे, सरकारमा क. खड्कप्रसाद ले एक्लै रजाइँ गर्नपाउने तर अरु क.हरुले टाढै बसेर टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अबस्थाले सिर्जना गरेकाे किचलाे हाे । क. खड्कप्रसाद ईतरका क.हरुले पालाे आकाे बेला सबैले बाडिचुडि खाऊन भनेर निरन्तर अनुनयबिनय गरेका छन तर खड्कप्रादले टेरपुच्छर लाएका छैनन । वास्तवमा यहि नै हाे नेकपा भित्रकाे किचलाेकाे जड । यी दुबै पक्ष मध्ये क.खड्क वा क. प्रचण्ड जाे आएपनि हुने यहि हाे अहिले जे भईरहेकाे छ । क. खड्कप्रसादले कलाे ढ्वाकेर बसेका क. हरुलाई कलाे फालिदिन्छन र केही समयकाे लागि किचलाे शान्त हुन्छ । याे भन्दा अगाडि भएकाे पनि यहि हाे र अहिले हुनेपनि यहि हाे ।
त्यसैले नेकपाका कार्यकर्ता कमरेडहरुले समाजिक सन्जालमा नेकपालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै रुन्चेस्वरमा राेईलाे गाउनु र नेकपा बाहेका का दलहरुले सरकार र मन्त्री पदकाे लागि र्याल काड्नु व्यर्थ हुनेछ । चुपचाप बस नेकपा कुनै हालतमा फुट्दैन, सिध्दान्तकाे बिबाद भएकाे भए सायद फुट्न सक्थ्याे हाेला तर पद र स्वार्थको बिबाद हाे याे कुनै हालतमा फुट्दै न । चतुर क. खड्कप्रसादले छिट्टै कुनै पदकाे तिर कमरेडहरुतिर फ्याक्नेछन र स्वयं कमरेडले भन्नेछन , खड्कप्रसाद जिन्दावाद । हुने यति नै हाे त्यसैले यत्तिकै लागि किन राेइलाे गर्नु किन र्याल काड्नु ।
अब क. बामदेम पत्निलाई मन्त्रीपदकाे सपथ खुवाउने भन्दा बढ्दा सफलता हासिले गर्दैन सायद याे चरणकाे किचलाे ले । फेरि हुने अर्काे चरणकाे किचलाेले के गर्छ गन्धनमन्धन गर्दैगराैला ।
मिसाउने बेलामै गलत बस्तुहरु मिसाउने अनि पछुताउने यहि नै हाे हामि नेपालिकाे नियति । सायद काेदाे र गहु मिसाएकाे भए वा ताेरी र सर्सिउ मिसाएकाे भए पिसे पिठाे, पेले तेलकाे अपेक्षा गर्न सक्थ्याे । मिसायाै काेदाे त ताेरि नत पिस्न मिल्ने नत पेल्न मिल्ने नत छुट्याउनै सकिने, यही नियति बन्ने छ नेकपाकाे ।